I-orgasm ithathwa njengento eqinileyo kunye nesimo esithandwa ngumfazi xa ulwalamano lomntu. Kwaye ukuba umntu unako ukuhambisa umlingane uchungechunge lweengqungquthela ezinamandla ngobusuku bonke, ufumana isihloko esihloniphekileyo esithi "The Stallion" kwaye uba ngumzekelo wokuba nomona ngabahlobo bakhe nabaziwayo, kuba bafunda ngo "mpumelelo" yakhe kuqala.
Abaninzi bayazi ukuba ibhinqa liyakwazi ukufumana iintlobo ezininzi zeengqungquthela. Ngokomzekelo, intombazana enye inokuvakalelwa yinto nje "yoluvo oluqinileyo", oko kukuthi, ufumana ubuthathaka obuthathaka, obubonisa ukuziphatha kwakhe ngokwesini. Ngokuphambene noko, iqabane elinobuchule kunye elinomdla livakalelwa ngogonyamelo kunye neengcamango ezicacileyo ezifana nokuqhuma. Abasetyhini banokuba neyodwa okanye iindida ezinokulandelelana ngexesha elifutshane.
Ukongeza kwi-vaginal orgasm, abameli abaninzi besifazane "bawela" elahleni yamava abo obulili, nangenxa yokubanga kwesifuba, intamo, izandla kunye neenyawo. Ngaloo nto, bafumana ubunzima obuqinileyo kunye nombane oqaqambileyo wokuzonwabisa, owuhlaba umzimba wonke ngaphandle kwengcamango yobudlelwane obusondeleyo. Makhe singathethi ngendlela umfazi angaphumelela ngayo ubufebe obupheleleyo besondo, njengoko abaninzi babo basabela ngendlela eyahlukileyo kwinkqubo yobudlelwane obusondeleyo.
Ulwahlulo lweemvakalelo ezithandwa ngabasetyhini ngezizathu zomzimba
Amadoda amaninzi akholelwa ngokugqithiseleyo ukuba ukutshutshisa ibhinqa kwisondlo kunye neendwangu ezingaqhelekanga kunokukhawulelana ne-orgasms, eye yabona ngaphambili. Oku kuyinyaniso, i-orgasm ibakhathaza ngokwenene abafazi abaninzi, kodwa akusona isizathu esona sizathu sokulala ngesondo kunye neqabane elitsha kwinqanaba lokuqonda. Ngokwenene, izinga lokuqonda nokuqonda kwe-orgasm lithathwa kuphela emva kokugqitywa kwesondo. Ukuba umthandi unako ukunika umfazi umdlalo - kunzima ukushiya kuye ukuya kumava "kwixesha lokulala". Emva koko, sele sele ibonakaliswe ukuba i-orgasm eqinile ihlala ikunceda ukunciphisa ukuxhatshazwa, yenza kube lula ukuphumla.
Uninzi lwabasetyhini abangazange "bazinyathele" ngokwabo ngokwesini ixesha elide baninzi baneengxaki zobunzima, njengokuba injabulo ngaphandle kokwaneliseka iyanciphisa isistim somzimba sabasetyhini. Isizathu sixoka, njengombandela, kwizinga lomzimba. Ngokuchasene noko, abafazi abahlala befumana "i-grandiose" kunye neentlobo ezahlukeneyo ze-orgasm abazihlupheki kwiingxaki ezinjalo. Ahluke nje kuphela kwiimeko ezilungileyo zempilo, kodwa nakwiindawo ezibonakalayo. Abafazi abanjalo "bakhanya ngovuyo."
Mhlawumbi lo mfazi "onoyolo" unako ukufumana zonke iintlobo zeengqumbo (zonke ezine). Makhe siqwalasele ngokubanzi ngalunye kubo.
Abasetyhini bafumana olu hlobo lwe-orgasm ngexesha lesini lesini. Kuyaziwa ukuba le ndlela 'yokwenza uthando' ivela ngaphandle kokusetyenziswa okungeziwe 'kwindoda yamadoda' kwinkqubo yesondo. Njengomthetho, amadoda amaninzi athetha xa ebiza igama elithi orgasm.
Ubungakanani kunye nomgangatho wobugcisa bale "nwabisa" kuya kuxhomekeka kakhulu kubukhulu bepenisi kunye nokukhawuleza kokuhamba kwayo. Nangona umntu unesigxina sesini esincinci, kodwa ukunyakaza kwakhe kudla rhoqo kunye nesigqi, kwaye uzisa kwaye ususe ipenis ngokupheleleyo - umfazi unako ukufumana "amandla" kunye ne-orgasm esemgangathweni. Oku kuya kuqhubeka rhoqo ngokwaneleyo ixesha elifutshane.
Olu hlobo lwe-orgasm lwenzeka ngexesha lokwabelana ngesondo, xa i-clitoris yintombi ichaphazelekayo ngezandla, ulwimi okanye umlomo, nangona kunjalo nangepenisi ngokwayo. I-penis yezocansi inokufaka isandla ekufezekiseni lolu hlobo lwe-orgasm.
Indlela yokuqala yinto xa intloko ixutywa ngokubhekiselele kwi-clitoris ngaphandle kokuba ifakwe ixesha elithile. Uthatha i-penis esandleni sakhe aze ahlaziye intloko kunye ne-clitoris kuqala, ngoko-labia.
Indlela yesibini: kwinkqubo yesondo. Kukho iimeko zokuhlala apho ipenisi igxotha ukuphela kwezibilini ze-clitoris ngokwayo, ngelixa ikhuthaza ukuvalelwa okungaqondakaliyo. Ngempembelelo enamandla kwi-clitoris, inokukhula kwaye ikhule ngokwanda. Kodwa ngezinye izihlandlo awakubonisi i-orgasm, kodwa uthetha ngesifiso esinomdla wokulala ngesantya.
Kuvela kwimeko apho ipenisi yendoda ifinyelela esibelethweni. Kuninzi kuxhomekeke kubude belilungu lendoda. Isibeleko somfazi siqala ukuphazamiseka nokuthuthumela. Le nkqubo ingakwazi ukuqhubeka nangemva kwexesha elide emva kokupheliswa kwe-orgasm ye-uterine, ngamanye amaxesha ngokungabikho kwelungu lendoda esiswini.
Uxinzelelo lwe-Orgmm kwinqanaba elithi "G"
Esi siphumo sinokufezekiswa ngokwenene ukuba intloko yepenisi ibonakala kwinqanaba elinqwenelekayo elithi "G". Ngelo xesha, i-pose ekhululekile kakhulu "ngumfazi ovela ngaphantsi", ngokukhethekileyo xa kukho umlotha phantsi kwesibindi somlingane. Iphuzu liyakwazi ukuvuvukala ngexesha elifanayo kunye nokwanda kancinci ngobukhulu kwixinzelelo kulo. Ngolu hlobo lwe-orgasm, njengomthetho, i-ejaculation yabesifazane iyabonwa (ixabiso elincinci lomkhuhlane likhishwa kwisisu). Akusoloko kunokwenzeka ukufumana le "ngongoma" ethandwayo, ungazama ukuyenza ngeminwe yakho.
Mhlawumbi, abaninzi baye bafunda elitsha elitsha okanye elilibala elidala. Sinqwenela ukufumana inani elikhulu leengqungquthela! Yaye ukhumbule ukuba ukwaneliseka ngokwesondo kuhlala kuqinisekiswa ngempilo kunye neemeko ezintle.
Indlela yesini yabantu behlabathi
Indlela yokulala ngesondo ngaphandle kwekhondom
Ukufunda ukudansa ngokucacileyo
Ikhofi "i-Oflameron" (iresiphi ye-1901)
Indlela yokufumana umama oselula
I-Technique yokugaya umqolo, umlenze nentamo nge-osteochondrosis
Isonka sokuzenzela "Pletenko"